पुस महिना र आइतबार जन्म भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/पुस महिना र आइतबार जन्म भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् ?
पुस महिनामा जन्मिने मानिसहरु निडर, कठोर, देवताहरुलाई नमान्ने र सुख–सुविधा उत्पन्न गर्ने खालका हुन्छन् ।
यस्तै ज्योतिष शास्त्रका अनुसार स्वामी अलग ग्रह हो । यसले हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ र भविष्य समेत कस्तो हुन्छ त्यसबारे थाहा हुन्छ । आइतबार जन्म भएका व्यक्तिहरु भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु लामो हुन्छ ।
यिनीहरु कम बोल्न, कलाकार बन्ने, धेरै मान सम्मान प्राप्त गर्ने खालका हुन्छन् । यसैगरी यिनीहरु धर्मकर्ममा विशेष रुची राख्ने, सबैलाई खुसी बनाउने खालका हुन्छन् । यिनीहरुले प्रत्येक दिन बिहान सूर्यदेवलाई जल चढाउँदा राम्रो हुन्छ ।